» Wasiirka Warfaafinta somaliland oo sheegay in Xabsiga ay dhigi Doonaan Qofkasta oo Ka Dhex Ololeeya Siyaasadda Muqdisho
Wasiirka Warfaafinta somaliland oo sheegay in Xabsiga ay dhigi Doonaan Qofkasta oo Ka Dhex Ololeeya Siyaasadda Muqdisho
Feb 16, 2017 - Maamulka Somali-land ayaa sheegay in xabsiga la Dhigi doono qof kasta oo kasoo jeeda deeganada Maamulkaas ee Muqdisho oo muqdisho ka sameeyo ficilo ka soo hor jeeda qadiyada Maamulka Somaliland.
Wasiirka Warfaafinta iyo wacyi gelinta somaliland Cismaan Cabdilaahi Saxardiid(Cadaani) oo shir jaaraid ku qabtay Magaalada Hargeysa ayaa sheegay in Somali-land ay xabsiga dhigi doono qof kastoo kasoo jeeda deeganada maamulkaas ha ahaado Mas’uul ama shacab, kaasi oo muqdisho ka sameeya waxa kasoo Somai-land.
Wasiir Cadaani ayaa tilmaamay in ay soo celin doonaan shuruucdii adkayd ee lagu qaadi jiray dadka usoo safra Muqdisho, waxaanu fariin u diray weriyayaasha kasoo jeeda deeganada Maamulkaas ee Muqdisho usoo safra.
“Waxaanu ka yeelanaynaa ma jirto haduu suldaan yahay iyo hadduu wariye yahay iyo hadduu ninkuu doono yahayba kaas oo ka ololaynaya qaranimada jamhuuriyada somaliland, wariye ayaanaan ka yeelayn, nin kalana ka yeeli mayno, qarankani shuruuc ayuu leeyahay kuwaas ayaanu boodhka ka tumaynaa qof kastana”, ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta iyo wacyi gelinta somaliland Cismaan Cabdilaahi Saxardiid(Cadaani).
Arintaan ayaa kusoo beegmaysa xili shalay Garoonka Diyaaradaha Magaalada Haregaysa lagu xiray wariye C/maalik Muuse Coldoon oo kamid ah wariyaasha Soomaliyeed ee kasoo jeeda deeganadaas maamulkaas, sababaha loo xiray ayaa lagu sheegay maxaad ula kulantay Madaxweyne Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo.